Soomaaliya, 18 December 2018
Talaado 18 December 2018
Kulan dhex maray Kheyre iyo Mursal
Guddoomiyaha baarlamanka iyo Ra'iisul wasaare Xassan Cali Kheyre ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee haatan ka taagan Soomaaliya.
Puntland: Musharaxiin walaac muujiyey
Galka Baarista: Maareyn la’aanta qashinka Soomaaliya
Muxuu ka dhigan yahay kulanka Kheyre iyo Mursal ?
AFRICOM: 62 Shabaab ah ayaan duqeymo ku dilnay
Militariga Mareykanka ayaa maanta sheegay in 62 mintidiin Shabaab ah ay ku dileen lix duqeyn oo sabtidii iyo axaddii ay ka fuliyeen deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeellada Hoose.
Musharaxiinta Koonfur Galbeed oo khudbado jeediyey
Xisbiga Wadajir oo sheegay in munaasabad laga hor-istaagay
Shirka Heritage oo lagaga Dooday Somaliland
Dalka Djibouti waxaa maalintii labaad ka socda madasha aragtiwadaagga Soomaalida oo ay soo qaban-qaabisay hay’adda Heritage. Kulankii maanta waxaa lagu soo bandhigay dood la xiriirta qadiyadda Somaliland.
Baydhabo: Murashaxiinta oo Barnaamijkooda soo Gudbiyey
Baarlamaanka Maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta dhageystay barnaamijka murashaxiinta xilka madaxweyne oo lagu wado inay qabsoonto Arbacada toddobaadka oo ku beegan 19-ka bishan December
Djibouti: Garsoore Cabdulqawi iyo Md. Geelle oo Kulmay
Cabdiqawi ayaa madaxweynaha Djibouti uga mahadceliyay doorkii weynaa ee Djibouti ku lahayd doorashadii loogu doortay madaxtinimada maxkamadda cadaallada adduunka.
AMISOM: Lug kuma Lihin Qabashada Roobow
Dhinaca kale, bulshada caalamka ayaa iyaduna war-saxaafadeed ay soo saartay waxaa lagu sheegay in ay ka walaacsan tahay xiisadda ka taagan Koonfur Galbeed, waxayna ku baaqeen in la taageero habka lagu heshiiyay ee doorashada la filayo in halkaasi ay ka dhacdo.